Yolcu treni – RayHaber | raillynews
Dab ka kacay Rakaabka Tareenka ee Masar
Masar gudaheeda, dabkii ka kacay rakaabka rakaabka, wagon wuxuu noqday wax aan caadi aheyn. Gaari rakaab ah oo rakaab ah ayaa dab ku qabsaday gobolka Kefr al-Zayat ee gobolka Garbiya ee Masar. Dad badan oo dab damis ah ayaa goobta ka dhacay [More ...]
BTS: 'Waxaan Dooneynaa Inaan Baxanno Shilal Tareen Ah'
Isbahaysiga 1 ee sannad-guurada Xilligga Shilalka Guriga; waan sii wadi doonaa halgankayaga si aan u helno kuwa dhabta ah! " Qoraalka qoraalka ee BTS uu yahay sidan soo socota; "Sannado ka badan 1, 8 July [More ...]
Tareenka Rakaabka ah ee ku Dhaafay Dalka Masar Qaadacsanaa 30 Injured
Tareen rakaab ah ayaa ku go'day Kefr al-Sheikh, Masar. Ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhaawacantay shilkaas. Qiyaastii ambalaaska 20 ayaa loo diray aagga uu shilka ka dhacay iyo dhamaan dadkii dhaawacmay Kefr [More ...]
Tareenka Rakaabka ah ee Diyarbakir Slams Raadin Gaadiid Ganacsi
Magaalada Diyarbakir, tareen rakaab ah ayaa ku dhacay gaari ganacsi oo marayay meel ka soo tallaabaya. Laba qof oo gaadhiga la socday ayaa waxyeelo ka soo gaadhay shilka shilkaas ayaa ka badbaaday tareen rakaab ah oo aan dhaawacnayn oo ku sugnaa degmada Bismil, isgoyska heerka. [More ...]
Dhibaatada Heerka Iskudhiga ah ee CHP u keento ajendaha ayaa la xalliyaa
Madaxa kuxigeenka CHP Group Ozgur Ozel Yunusemre ee xaafada Barbaros isgoyska shilalka dhimashada ee xaafada kadib ajandaha, Menemen-Manisa, oo ay kujirto Barbaros Neighborhood 2. iyo 3. sameynta samayska [More ...]
Saddex qof ayaa ku dhaawacmey dhul gariir ka dhacay xNUMX shalay subaxnimadii oo ka dhacay Krasnodar, Russia. Shaqaalaha rakaabka ee 6.30 ee 27 ayaa saarnaa tareenka rakaabka inta shilka uu socday. Marka hore la sameeyay [More ...]
37 Wuxuu go'aansaday AYM Pamukova Train Crash, halkaasoo mid ka mid ah uu lumiyay noloshiisa
Tareenka 2004 Haydarpasa-Ankara ee ku dhow agagaarka degmada Pamukova ee tareenka waxaa ku dhacay shil sababay in dadka 37 la dilo, dadka 90 ayaa ku dhaawacmay shilka, maxkamada dastuurka, TCDD'nin si ay u siiso magdhaw codsadayaasha. 2004 [More ...]
Guddoomiyaha Sivas Salih Ayhan, tareenka rakaabka ah ayaa isku dhacay tareenka xamuulka ah iyada oo ay ugu wacan tahay dhaawacyadii ku dhaawacmay cisbitaalka ayaa booqday daaweynta. Guddoomiye Ayhan, ayaa ku dhaawacmay qaybo kala duwan oo shilka ah iyo Isbitaalka Sivas Numune iyo Jaamacadda Cumhuriyet [More ...]